Isbadalkii uu Garbajoof ku sameeyey Midowgii Soofiyati iyo Ka Abiy ee Itoobiya ma la is bar bar dhigi karaa?….. Wareysi MW: Mustafe M. Cumar |
Waa Qaybtii 2aad ee wareysigii uu warsidaha Addis Standard la yeeshay madaxweynaha dawlada deegaanka Soomaalida Musatfe Muxumed Cumar, qaybtan madaxweynuhu wuxuu kaga jawaabayaa su’aalo xasaasi ah. ka bogasho wacan akhristyaasha sharafta leh..
Addis Standard: Waan ogahay in erayga isiraynta siyaasadu uu yahay mid macno balaadhan oo u baahan in la kala qaad qaado. Marka lays barbar dhigo siyaasadda isiraysan iyo xisbiga iyo dowladnimada oon kala saarnayn mudadii la soo dhaafay, keed u malaynaysaa in uu keenay fashilkii siyaasadeed iyo kacdoonkii dadwaynaha ee ka danbeeyey? Way iska caddahay in xisbiga iyo dowladu ay mid ahaayeen taas oo meesha ka saartay dadaal walba oo lagu doonayo dimoqraadiyad dhab ah. Haddi lagu yidhaahdo mid uun meesha ka saar keebaad ku bilaabi lahayd? Ma siyaadda isirka ku dhisan mise kala saaridda xisbiga iyo dowladnimada? Mise wayba siman yihiin?
MW. Mustafe: Waxay ila tahay inaan horta eegno sababta keentay in xisbiga iyo dawladnimadu mid noqdaan. Sababtu waxa weeye, wadanka dimoqraadiyad kama jirin, doorasho hufanna kama jirin. Hadii ay jiri lahayd doorasho xor iyo xalaal ah, maba dhacdeen in hal xisbi baarlamaanka iyo dowlada haysto. Waxaa jiri lahaa wada hadal iyo gorgortan siyaasadeed oo axsaabtu yeeshaan taas oo meesha ka saari lahayd danaha hal xisbi, waxaadna ogtahay in xisbi walba uu dano gaar ah lee yahay. Marka ay timaado matalaadda dawladda dhexdeeda ah xisbigu u dhaqami maayo xisbi ahaan ee waa inuu wada hadal laga galaa, axsaabta horseedka ka ah ama isbahaysiga la ah, taas oo ka dhigan wixii laysku raaca, waa wax qaran ee ma aha wax uu leeyahay xisbi kaliya. Waxa ay aniga ila tahay in waxa ugu horeeya uu yahay in la helo doorasho xor iyo xalaal ah, oo meesha ka saaraaysa saamaynta tooska ah ee xisbi ku yeelan karo dawladnimada, dawladuna ay ka duwanaataa xisbiga. Si kastaba u dhigoo, waad fahmi kartaa dhibka ya leedahay marka xisbiga iyo dawlad dadka u dhaxaysa ay isku mid noqdaan. Waad qiyaasi kartaa aragti ahaan, laakiin waa ay ka dhacdaa xitaa axsaabta demoqraadiga ah, hadii aysan kala duwanayn dadka xisbiga leh iyo dadka dawladda hogaaminaya. Markaa oo kale waa marka uu xisbi leeyahay dad gaar ah oo iyagu ku mashquulsan cilmi baadhis iyo horumarin, eegayana afkaarta caawin karta in xisbigu ku guulaysto doorashada, markaa oo ruuxa loo doorto inuu hogaamiyo dawladda uu ku hogaaminayo habka ama jihada uu xisbigu u jeexay. Waxaan filayaa in aynaan halkaa wali gaadhin Itoobiya ahaan. Dhaqankeena siyaasadeed uma bisla ilaa heerkaa. Sidaa awgeed xaaladu waxay u eg tahay in, mudada soo socota ay sii ahaan doonto sidii hore ee xisbiga dawladu is ku mid ahaayeen. Sidaa ayay iila muuqataa, laakiin, jihadaa waa in la yareeyaa
Addis Standard: Marka laga hadlayo doorashooyinka, sida aad sheegatay, hal arrin oo lagu yarayn karo mid ahaanshaha dawladda iyo xisbiga waa in la helaa doorasho xor iyo xalaal ah. Ma u malaynaysaa in ay dhacayso doorashadaasi, 2020? Anigu waxaan qabaa dib u dhigga doorashadu in uu albaabka u furi doono, waxyaabo horseedi kara degaansho la’aan, gaar ahaan in dhinacyada danaha siyaasadeed leh ay dawlada ka dhigaan mid ku dhisan sharci daro. Sideed u aragtaa arrintaas. Ma in doorashooyinku dhacayaan? Ma in dawladu ay mudnaanta siiso amaanka iyo xasiloonida oo markaa aan aadno cod bixin? Mise waxay kula tahay in dib loo dhigo xaaladaha jira awgood?
MW. Musatafe: aniga aragtidayda, waa in tix galin la siiyo nabadda iyo xasiloonida iyo sidoo kale xili kala guur ah oo bad qaba intii mudnaanta la siin lahaa codayn kaliya si loo gaadho doorasho uun. Anigu arrintaa ayaan rumaysnahay, dawladuna xaaladda amni ee ka jirta wadanka, horumarka siyaasadeed iyo isbadalada lagu sameeyay hay’adaha dawladda ee kala duwan ayay qiimaynaysaa inta aan la gaadhin doorasho iyo wax la mid ah, iyada oo taa laga duulayo waxaan filayaa in dawladu u furantahay in doorasho la qabto iyo in dib loo dhigo. Dawladu ma rabto in ay ku degdegto doorasho sababta oo ah dawladu waa cidda ugu habaysan uguna abaabulan ee jirta, mana doonayso in hadhow, xisbiyada siyaasadeed ay ku andacoodaan waqti aan ku diyaargarowno nalama siin. Isla markaana dawladu ma doonayso in loo arko in ay hormuud ka tahay dib u dhigga doorashada sababo la xidhiidha in ay rabto inay sii haysato xukunka. Waxaan filayaa dawladu in ay dhexdhexaad ka tahay arrintaas. Laakiin aragtidayda shakhsiga ah waxaa weeye, xiligan kala guurka ah waxa uu u baahan yahay, waqti dheeraad ah, sidaa darteedna waxaan jeclaan lahaa inaan arko iyada oo la gabagabeeyey dadaalada lagu balaadhinayo ka qayb galka siyaasadeed, xoojinta hay’adaha dawladda oo ay ka mid tahay gudiga doorashooyinka, habka cadaaladda iyo amniga inta aan lagu degdegin doorasho. Aragtidayda shaqsiga ah waa taa.
Addis Stadndard: laakiin waa maxay waxa aad filayso inuu keeni karo nabad galyo daro? Ma dawladda oo mudo xiliyeedkeedu su’aal gali doono, mise waa dhibaatooyin ka dambayn kara marka ay doorasho dhacdo sababta oo ah xisbiyada mucaaradka ah oo aan ku qanacsanayn habka doorashooyinka? Su’aashan waxaan kuu waydiinayaa waxa weeye waa khibradii aan ka helay kacdoonkii balaadhnaa ee ka dhacay wadanka ka dib markii ay dawladda hadda jirta sheegatay in ay ku guulaysatay 99 boqolkiiba doorashadii xiligaas. Sidoo kale waxaan xusi karaa kacdoonkiin halkan Addis Ababa ee ku salaysnaa ismaamulka magaaladu uusan haysan wax sharciyad ah, taas oo tusaale u ah in lala shaqeeyo dawlad xiligii dastuurga ahaa ee xafiiska uu ka dhamaaday.
MW. Mustafe: Waa Hagaag, marka kowaad, mala awaalka ah in ay dawladu waayayso sharciyadii dadweynaha wax sax ma aha, sidaa darteedna waa inaan marna miiska la keenin wax ku saabsan sharciyad la’aan. Haddii ay arrintu sidaa noqoto, dawladda hadda jirta ee guusha sheegatay shan sano ka hor sharci darro ayay noqonaysaa. Laakiin rukhsad ayay u heshay inay jirto sababtoo ah waa isbadal kii uu ku dhaqaaqday RW. Abiy iyo dadka la shaqaynaya, taas oo siisay RW. Abiy sharciyadda dadwaynaha maanta. Ma filayo inuu jiri doono qof ka cabanaya haddii uu RW. Abiy yidhaahdo waxaan u baahanahay waqti dheeraad ah si aan u xaliyo dhibaatooyinka jira. Waxaan filayaa inuu taageero ballaadhan ka haysto hadda dadka reer Itoobiya ayna badi ku kal soonyihiin. Haddii aan sidaa u dhigno u malayn maayo in dib u dhigga doorashadu ay keeni doonto wax nabad galiyo darro ah. Laakiin waxa kale oon garan karaa in qayb gaar ah aysan ku farxaynin; haddii aad ka eegto dhinaca danta qaranka, ma filayo inuu qofna ka hor iman doono in doorashadda dib loo dhigo. Waxa nabad galiyo darrada keeni kara waxa weeye in lagu deddego doorashada inaga oo aan xalin arrimaha amniga ee aan ka soo sheekaynay, taas oo qayb ka ah xiligan kala guurka ah. Sidoo kale lama diyaarin is badalkii hay’adeed ee loo baahnaa. Waan ogahay in shaqo fiican la qabtay ilaa hadda laakiin waa in la dhamaystiraa, mucaaradkuna qaybtooda ka qaataan. Isbadalku ma aha kaliya dhanka dawladda, waxaana filayaa dawladdu inay horumar wanaagsan samaysay marka la eego ilaalinta iyo tixgalinta sharciga, iyo marka la eego dulqaadka iyo is xakamaynta. Sidaa oo kalana waxaan ka sugaynaa dhanka mucaaradka, taasina waa horumar kale oo aan ka filayno inuu ka yimaado mucaaradka sanadkan, ama labada sano ee soo socota. Si guud haddii aan soo koobo, inaan ku degdegno doorasho iyada oo aanan diyaar ahayn ayaa keeni karta nabad galiyo darro ka daran hadii doorashada dib loo dhigo; arrinta ku saabsan sharciyada dawladda waxaan filaya in taasi meesha ka baxday markii doorashadii hore lagu shubtay ay dadkuna kaceen si isbadal u yimaado. Sharciyadda kaliya ee aan hadda aragno waa mida ay haystaan dadka isbadalka wada, waana RW. Abiy, waxa uuna haystaa sharciyadda dadwaynaha oo uu wadanka ku xukumaa, waana sababta ay mucaaradku ugu faraxsan yihiin, waa sababta ay kooxo hubaysnaa hubka u dhigeen, waana sababta ay qaybo badan oo ka mid ah wadanku u taageersan yihiin isbadalkiisa iyo aragtidiisaba.
Addis Standard: in kasta oo uu jiro isbadalkaasu, aan ka hadalo is barbar dhig ku saabsan, haddii aad doonto, is badalkii uu ku sameeyey Gorbajoof Midowgii Soofiyati, iyo isbadalkii demoqraadiyadeed iyo Abiy-ga Itoobiya ee maanta gaar ahaan dhinacyada is badalka dhaqaale iyo siyaasadeed. Falanqaynta aan u dayno dadka ku xeeldheer siyaasadda oo aan ku waydiiyo su’aal toos ah, bal in adiga iyo dadka kale aad isku si u aragtaan. Ma kula tahay inuu is barbar dhig sax ah yahay? Ma tahay ugu yaraan mid isku dhaw?
Mw. Mustafe: haddii aad eegto midowgii Sofiyat-kii hore, Yugoslavia, iyo Czechoslovakia waxay u dhisnaayeen wadamo ahaan, waxaadna garan kartaa inay u samaysnaayeen qaab isir ku salaysan si guud, haddii u aad eegto, kala duwaanta isiradda dhexdooda ahna iyo dadka hormuudk ka ah, marka loo eego heer gobol iyo mid federaal ba, waxaan filayaa isku mid ahaansho inuusan jirin, iyada oo ay sidaa tahay hadana in la is barbar dhigaa khalad ma aha. Siday doontaba ha noqotee, waxaa jiray arrimo dibadeed oo ka qayb qaatay is badalka, taasina way ka maqan tahay xaaladeena. Midowgii Sofiyat-kii, reer galbeedku waxa ay culays dhaqaale iyo mid siyaasadeedba saareen sidii uu is badal uga dhici lahaa, iska soo horjeed xagga fikir ka ah awgii. Arrintaa dibadeed ee is badalka keentay kama jirto Itoobiya. Enagu gabi ahaanba waan ka duwannahay taas, waxaan haysanaa rabitaan caalami ah oo ku saabsan in ay Itoobiya wada jirto iyada oo hal wadan ah, waana mid oo aan ku kala duwan nahay. Sidoo kale marka loo yimaado heer qaran, waxaan filayaa inaan haysano dad badan oo qaba in kala burburka Itoobiya uusan u wanaagsanayn qof walba oo Itoobiyaan ah. Ma aha in ay koox kaliya dan u tahay, laakiin si kasta oo dhib loo maro, in wadanka la kala googooyo marna ma aha wax la qaato. Ma arag qof wax garad ah oo arrintaa qaba. Siday doontaba ha noqotee, haddii aan xiligan kal guur ka ah si wanaagsan loo maaraynin, haddii aan xoogagga xagjirka ah ama madaxa adag ee madaxa la soo kacaya meelo badan oo ka mid ah wadanka ay sii wadaan fikirkooda ah “tayda uun” waxaan gali karnaa dhibaato weyn, tan kaliya ee naga badbaadin kartana waxaa weeye in dawladda dhexe ay xoojiso hirgalinta sharciga gaar ahaan deegaannada, waxaan filayaa inaan ka badbaadi karo sidii ku dhacday Midowgii Sofiyat-ka, aadna waan u rajo fiican nahay.
Addis Standard: Laakiin xaaladda ka jirta deegaanada, sida in dawladdu ay awoodda iyadu kaligeed leedahay, haddana ay jiraan awoodo kale oo gaar ah, taas oo wadada u xaadhaysa in dadka caadiga ah ay ku biiraan xoogag hubaysan, aniga oo kuu sheegi kara tusaalyaal badan oo ah sida poolis ka gaar ka ah, arrintan makeenaysaa si la mid ah sidii ka dhacday Yugoslavia. Maxay kula tahay in laga sameeyo? Waxaad aragtay heerka kala dambayn la’aaneed ee ay ka dhalisay Deegaankaaga Somaliyeed, tusaale ahaan. Ma kula tahay in wax laga badalo arrintan?
MW. Mustafe: waxaan filayaa khaladka ugu waynaa ee la sameeyey inay tahay in laga sameeyo deegaanada ciidamo madax banaan. Wadanna kuma shaqayn karo sidaa oo kale. Waana mid ka mid ah sababaha dhibka inoo keenay. Isbadal iyo dib u geesi xagga amniga ah waa in la sameeyaa, waana in la xaliyaa arrinta ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya ciidamada kala duwan ee ka jira deegaanada iyo sida ay u wada shaqaynayaan, waxaana aaminsanahay in laga dhigo wax macquul ah oo wada socon kara. Deegaanadu way yeelan karaan ciidomo poolis ah tusaale ahaa, laakiin, waajibaadkoodu waa inuu cad yahay, hadii la rabo in la illaaliyo nabadda waa in aan yeelanaa hal ciidan qaran; hadii u muran ka jiro sida loogu kala badan yahay ciidanka qaran, waa in wax laga qabtaa oo la xaliyaa iyada oo la saxayo qaabka xulashada ciidanka, ee ma aha in la yeesho ciidamo gaar gaar ah oo meel walba jooga. Haddii ay dhacdo in dood laga keeno sidii loo hubin lahaa in ciidanka qaranku is la falgalaan iyagoo luqad ahaan kala duwan tusaale ahaan, waa arrin laga wada hadli karo, iyada oo laysla eegayo sdii loo horumarin lahaa. Iyadoo taa lagu salaynayo, sida iyo qaabka ay u howlgalayaan waa la badali karaa, laakiin ma yeelan karno kooxo hubaysan iyo ciidamo madax banaan hal wadan gudihii iyada oo loogu marmarsoonayo federalnimo. Sidaa awgeed waa in xal la helaa, waa hal cashar oo aan ka baran karno Yugoslavia. Mar kasta oo aan ku dhaqsano way ka fiican tahay.
Addis Standard: ma waxaad ku talinaysaa in si tartiib tartiib ah loo kala diro waxa lagu magacaabo ciidamada gaar ka ah?
MW. Mustafe: Haa, si cad waxaan ugu talinayaa in si tartiib tartiib ah loo kala diro ciidamadan gaar ka ah
Addis Standard: dhacdadii ugu dambaysay ee ku saabsan ciidama gaarka ah, waxay ahayd eedayntii lagu eedeeyey ciidamada gaar ka ah ee Canfarta inay dileen 11 ruux oo rayid ah oo soomaali ka soo jeeda, taas oo kicisay xiisad labada deegaan ee Soomaalida iyo Cafarta ah. Waan fahansanahay inaad wada hadal kula jirto madaxwaynaha deegaanka Canfar ta sidii meel dhexe laysugu iman lahaa. Ma jiraan wax xal oo ay wada hadaladiinu gaadheen?
MW. Mustafe: inta badan dadku waxa ay maqleen oo kaliya todobaadki la soo dhaafay, laakiin arrintu ma ahayn tobobaadkii la soo dhaafay oo kaliya. Waxaan filayaa anaga qiyaastayada in ku dhawaad 75 ruux oo Soomaali ah ay ku dhimatay dhinaca soomaalida, waxaana laga yaabaa in dhanka kalena ay intaas oo kale ama ka badan ay sidoo kale ku dhinteen lixdii bilood ee la soo dhaafay. Ma aha arrin aan horay u jirin, waxaa jiray xoogaa nabad galiyo darro ah oo ka jirta aagaas. Hadda waxaan isku raacnay in aan wada hadalo arintana si nabad iyo saaxiibtinimo ah aan ku xalinno, wasaaradda amniga tilmaan ayay ka bixisay arrintan, waxaana filayaa in mar dhaw aan dadwaynaha la wadaagi doono waxa aan isku raacnay, laakiin waxaan kuu sii sheegi karaa in uu yahay wax dadka Soomaalida iyo Canfartaba u wanaagsan. Majiro cadaawad naga dhaxaysa oo aanan si nabad ah ku dhamayn Karin, mana jiri doono dagaal na dhax mara.
Addis Standard: mar dhaw miyaan fili karnaa faahfaahinta ku saabsan wada hadalka? Waa inaan xusaa in sidoo kale saraakiil ka mid maamulka Canfarta ay iyaguna Addis Standard u sheegeen in ay nala wadaagi doonaan faahfaahinta wada hadalka
MW. Mustafe: Haa, waxaa jira heshiis ku saabsan in aysan jirin su’aal dambe oo miiska saaran, dhibkaana markiisii hore ma ahayn mid looga gol lahaa in ujeedo siyaasadeed ay ku gaadhaan labada dhinac midna. Haddii ay jiri karaan su’aalo ay qabaan dadka Canfarta ama dadka Soomaalida waa in loo maraa hab dimoqraadi ah oo nabadeed. Arrinta ku saabsan saddex goobood, waanu ka wada hadlaynaa, waana is ku raacsanahay meelaha ay tahay in si dhab ah laysula eego, sabata oo ah waxaan filayaa in waxa dhibka keenay ay tahay fulin la’aanta wixii laysku raacay. Waa laga wada hadlayaa, mana doonayo inaan ka hordhaco wax laga wada hadlayo.
Addis Standard: ugu dambayntii, waxa aan layska indho tiri karin waa doorka warbaahintu ku leedahay xorriyadda hadalka. Wax sir ah ma aha in natiijadii ka dhalatay, fursadda xorriyadda warbaahinta ay keentay in ay soo baxaan, warbaahin lagu tilmaami karo in ay ka qayb qaadanayaa isku dhacyada iyo colaadaha iyo sidoo kale inay faafinayaan nacayb iyo in ay warar been abuur ah ku baahiyaan baraha bulshada. Maxay kula tahay si laysugu dheeli tiro xorriyadda hadalka iyo warbaahinta iyo inay soo baxayaan arrima noocan oo kale ah gaar ahaan xiligan xasaasiga ah.
MW. Mustafe: aniga mowqif kaygu waxaa weeye, waan u baahanahay war baahin xor ah, waan u baahan nahay warbaahin mas’uul ah. Marka ay timaado in warbaahintu dadka isku dirto, ayna ku fashilanto inay doorkeeda warbaahineed qaadato, waxaan filayaa inuu jiro sharci ku saabsan sidii arrintaa loo maarayn lahaa. Intaa waxaa dheer, arrinta la xidhiidha mas’uuliyad darrada warbaahinta qaarkeed waa inaysan horseedin inaan ku noqono sharciyo dibu socod ah oo meesha ka saaraya xorriyada hadalka mudo dheer. Waxaan filayaa inay tahay in la ilaaliyo isu dheeli tirnaanta labada arrimood. Haddii ay soo baxaan dhawaaqyo dhab ah oo ah in aysan warbaahintu mas’uul ahayn, waa inaan ka shaqaynaa sidii aan uga dhigi lahayn kuwa mas’uuliyad ku shaqeeya, waa inaan qaadnaa talaabooyinka sharciyeed ee loo baahanyahay. Laakiin, haddi arrintu tahay inaan ku noqono meeshii aan ka nimid oo ah inaan hor joogsano wax walba oo aynaan rabin inaan maqalo, waxaan filayaa taa waan ka gudubnay hadda, mana meel marin karno, umana baahnin.
Waxaa Soomaaliyeeyey: Axmed Maxamed Yuusuf
Waxaa tafatirey: Xasan Ciise